အနီရောင်အစိမ်းရောင် Colorblind တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုဘုံများမှာအဘယ်ကြောင့်? - Iris က💡💻 - မျက်လုံးကာကွယ်မှုများအတွက် software ကို, ကျန်းမာရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား🛌👀
အနီရောင်အစိမ်းရောင် Colorblind တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုဘုံများမှာအဘယ်ကြောင့်?
ပြည်နယ်အဘို့အတာဝန်ခံဖြစ်သောဗီဇက X ခရိုမိုဆုန်းအပေါ်ယူသွားတတ်၏နှင့်ဤမိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်အများအပြားပိုပြီးတို့သညျဤပြဿနာကနေထိခိုက်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်ပါသည်.
အရောင်ကန်းကျား, မကျြစိကနျးမဟုတျပါဘူး, တကယ်တော့ဒါဟာပိုပြီးမကြာခဏလူတို့တွင်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါပြဿနာအပေါ်သက်ရောက်မှု 1 တိုင်းအတွက် 12 ဤတိုင်းပြည်များတွင်ယောက်ျား.
မှန်ကန်သောအရောင်ကန်းအချက်အလက်များအတွက်, လူအကိုသူတို့ဖွင့်မီးခိုးရောင်နဲ့အနက်ရောင်အရိပ်ကိုမြင်ရမှသာလျှင်အရောင်မျက်စိကန်းများမှာ. ဒါဟာအဖြစ်မှန်အတွက်သို့သော်အလွန်ရှားပါးသည်. အရောင်ချို့တဲ့၏ပိုပြီးဘုံအခွအေနေပြည်နယ်အရောင်ရူပါရုံကိုချို့တဲ့ဖြစ်ပါသည်. ဒီပြည်နယ်ထဲမှာ, ဂရင်းနှင့်လီဗာပူးရှုပ်ထွေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
အများအားဖြင့်ဤပြဿနာကိုရိုက်အရာကိုဆက်ခံဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် 23 ခရိုမိုဆုန်းအပေါ်သားကိုမိခင်ကနေလွန်နေသည်. သော်လည်း, ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောမျက်စိရောဂါများအားဖြင့်လည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်, လှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အိုမင်း.
အဆိုပါကြောင်, ယုန်, နှင့်ခွေးမီးခိုးရောင်အရောင်အတွက်အများအားဖြင့်သောအရာတို့ကိုကြည့်ရှု. သို့သော်ငြားလည်း, လိပ်ပြာများနှင့်ပျား သာ. ကွီးမွတျသောရူပါရုံကိုရှိသည်နှင့်လူသားတွေတောင်မှမမြင်နိုင်ရာရှင်းလင်းစွာအရောင်များတွေ့မြင်နိုင်သည်သော်လည်းမျောက်အားကောင်းတဲ့အရောင်ရူပါရုံကိုတို.
ပုံမှန်အားဖြင့်အရောင်ရူပါရုံကိုချို့တဲ့ခြင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုပျော့စေနိုင်သည်, အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ချို့တဲ့ပေါ် မူတည်. ရက်စက်.
ယေဘုယျအားဖြင့်, အဲဒီမှာကန်တော့ချွန်ဆဲလ်သုံးမျိုးဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးချင်းစီကြင်နာရောင်ခြည်လှိုင်းအလျားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော sensitivity ကိုနဲ့သနားကရုဏာရှိပါတယ်.
ကန်တော့ချွန်တစ်ခုမှာကြင်နာအပြာရောင်အလင်းရိပ် မိ., အခြားအစိမ်းရောင်ရိပ် မိ. နှင့်တတိယတဦးတည်းအနီရောင်အရိပ်ရိပ် မိ. စဉ်.
ဥပမာ, အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်တစ်မျိုးကတော့လူတယောက်ထုံးစံ၌ simulated ကြသောအခါတစ်ဦးအမှု၌ထို့နောက်တခရမ်းရောင်အရောင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
ငါတို့သည်သင်တို့တစ် colorblind ဖြစ်ခြင်းပင်ပန်းဖြစ်ကြပြီးသင်ရုံသာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းတူအရောင်များကိုမြင်ချင်ကြောင်းနားလညျနိုငျ.
အကြှနျုပျတို့သညျထိုအဘို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် Vision ၏. Use the software to see colors just like any normal individual.
အရောင် blindness နဲ့လူများအများစုမှာအစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်အရောင်များ၏အဓိပ္ပါယ်ရိပ်ခွဲခြားလို့မရပါဘူး.
Vision ၏ကြိုးစားပါ colorblind စမ်းသပ်. သင် colorblind များမှာသို့မဟုတ်မရှိမရှိထွက်ရှာတှေ့နိုငျ.